Zon'olombelona · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Zon'olombelona
Azia Afovoany sy Kaokazy3 andro izay
Eoropa Afovoany & Atsinanana7 andro izay
Tantara mikasika ny Zon'olombelona
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 1 herinandro izay
Ity fanadihadiana ity no fifandirana farany indrindra teo amin'ny Antokon’ny fitondrana Rariny sy ny Fampandrosoana (AKP) sy ny Antoko mpanohitra lehibe Antokon'ny Vahoaka Repoblikana (CHP).
Aiza ilay Qatari mpiaro ny zon'olombelona Noof Al-Maadeed?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 2 herinandro izay
Nandositra nankany Angletera ho fiarovana ny ainy manoloana ny rainy, niverina an-tanindrazana tao Doha izy rehefa nahazo antoka tamin'ny manampahefana Qatari fa ho arovana. Nanjavona izy andro vitsy taorian'izay.
Vakio ireto tantara 10 miresaka ny mari-panondroana sy ny fiahiana ny tontolo iainana ary ny fisoloantena anjotran'ny maity sy ny vazimba ireto.
Maneho hevitra ankarihary amin'ny media sosialy ny mpanohana ireo miaramila ao Myanmar, manao ho lasibatra ireo mpanohana ny demaokrasia. Ary manakombona ny feon'ireo mandranty ny haratsin'ny rivotra ao amin'ny faritra ny governemantan'i Punjab ao Pakistan.
"Nanoratra bilaogy aho, nanohy naneho ny hevitro momba ny olana toy ny demaokrasia, ny kolikoly, ny fiandrianam-pirenena aho. Zavatra azon'ny rehetra atao izany, ary raha ny marina, tokony hataon'ny rehetra."
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 3 herinandro izay